HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Amis Anglisy Arabo Armenianina Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bashkir Bassa (Cameroun) Bengali Bicol Boligara Boulou Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chol Cinghalais Cinyanja Dangme Danoà Douala Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fon Frantsay Ga Garifuna Goujrati Goun Grika Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Holandey Hongroà Ibanag Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Jula Kabiyè Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Kurde Kurmanji Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kwangali Kwanyama Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mbunda Mingrelian Mixe (Afovoany) Mongol Mooré Motu Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Norvezianina Nzema Népali Okpé Oromo Ossète Otetela Ouzbek Pangasinan Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin (Cameroun) Pidgin Nizerianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Ponape Portogey (Brezila) Quechua (Ancash) Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Afrika Atsimo) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tailandey Tajiki Tamoul Tatar Tchouvache Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tlapanèque Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tseky Tshiluba Tsonga Turkmène Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Urhobo Vietnamianina Waray-Waray Wolaita Xhosa Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa tzeltal Édo Éwé
TSY noeritreretin’i Josefa avy any Arimatia hoe ho vitany ny hiresaka amin’i Pontio Pilato, governora romanina. Nalaza ho hentitra be mantsy izy io. Tsy maintsy niera taminy anefa vao afaka naka ny fatin’i Jesosy mba halevina amin’ny fomba mendri-kaja. Tsy arakaraka ny noeritreretin’i Josefa ny nitranga. Neken’i Pilato ny fangatahany rehefa avy naka toky tamin’ny manamboninahitra iray izy hoe maty tokoa i Jesosy. Lasa haingana i Josefa avy eo nankany amin’ny toerana namonoana an’i Jesosy. Mbola nalahelo be izy tamin’izay.—Mar. 15:42-45.
Iza moa i Josefa avy any Arimatia?
Mpifaninona izy sy Jesosy?
Nahoana no tokony hahaliana anao ny tantarany?
ANISAN’NY FITSARANA AVO JIOSY
Milaza ny Filazantsaran’i Marka fa “lehilahy nanan-kaja anisan’ny Filan-kevitry ny Jiosy” i Josefa. Ny Fitsarana Avo Jiosy ihany ilay hoe Filan-kevitry ny Jiosy, raha jerena ny andininy hafa. (Mar. 15:1, 43) Io fitsarana io no fahefana tampony tamin’izany. Anisan’ny mpitondra tamin’ny androny àry i Josefa. Izany no nahafahany nihaona tamin’ny governora romanina. Tsy mahagaga koa raha nanan-karena izy.—Mat. 27:57.
Sahinao ve ny manaiky fa i Jesosy no mpanjakanao?
Nankahala an’i Jesosy ny ankamaroan’ny mpikambana tao amin’ny Fitsarana Avo, ka nikononkonona tetika hamonoana azy. Tsy nitovy tamin’ireo mpiara-miasa taminy ireo i Josefa. “Lehilahy tsara toetra sy marina” izy. (Lioka 23:50) Nanao ny tsara izy ary niezaka mafy nankatò ny didin’Andriamanitra. “Niandry ny fanjakan’Andriamanitra” koa izy, ary izany angamba no nahatonga azy ho lasa mpianatr’i Jesosy. (Mar. 15:43; Mat. 27:57) Azo inoana fa liana tamin’ny fampianaran’i Jesosy izy satria tia ny marina sy ny rariny.
TSY NISEHO HO MPIANATR’I JESOSY
Milaza ny Jaona 19:38 fa “mpianatr’i Jesosy” i Josefa, “saingy tsy niseho ho mpianany noho ny fahatahorany ny Jiosy.” Nahoana izy no natahotra azy ireo? Fantany hoe tsy tian’ny Jiosy i Jesosy, ary efa nilaza izy ireo fa horoahiny hiala amin’ny synagoga izay milaza hoe mino azy. (Jaona 7:45-49; 9:22) Nambanin’ny Jiosy sy nailikilik’izy ireo izay Jiosy noroahina tao amin’ny synagoga. Lasa tsy sahy nilaza tamin’ny olona àry i Josefa hoe mino an’i Jesosy izy. Raha manao an’izany izy, dia mety hesorina tsy ho anisan’ny Fitsarana Avo ary tsy hohajain’ny olona intsony.
Tsy i Josefa irery no hoatr’izany. Milaza ny Jaona 12:42 hoe ‘maro tamin’ireo lohandohany teo amin’ny Jiosy no nino’ an’i Jesosy. “Fa noho ny Fariseo dia tsy niaiky ny amin’izany ireo, sao ho voaroaka hiala amin’ny synagoga.” Hoatr’izany koa i Nikodemosy, izay anisan’ny Fitsarana Avo.—Jaona 3:1-10; 7:50-52.
Efa mpianatr’i Jesosy mihitsy anefa i Josefa, fa tsy sahy nilaza an’izany. Tena tsy nety izany rehefa jerena ireto tenin’i Jesosy ireto: “Izay manaiky ahy eo anatrehan’ny olona, dia hekeko koa eo anatrehan’ny Raiko any an-danitra. Fa izay mandà ahy eo anatrehan’ny olona kosa, dia holaviko koa eo anatrehan’ny Raiko any an-danitra.” (Mat. 10:32, 33) Marina fa tsy nanda an’i Jesosy i Josefa. Tsy sahy nampiseho anefa izy hoe nanaiky azy. Ary ianao?
Mendrika ny hoderaina i Josefa satria tsy nanohana ny tetiky ny Fitsarana Avo hamonoana an’i Jesosy. (Lioka 23:51) Mety ho tsy nanatrika ny fitsarana an’i Jesosy izy, araka ny lazain’ny olona sasany. Na nanatrika anefa izy na tsia, dia azo antoka fa kivy be izy nahita ny tsy rariny nihatra tamin’i Jesosy, saingy tsy afa-nanoatra.
NAHAVITA NANAPA-KEVITRA IHANY
Toa efa tsy natahotra intsony i Josefa tamin’ny fotoana nahafatesan’i Jesosy. Nanapa-kevitra ny hiaraka tamin’ny olon-kafa mpanara-dia an’i Jesosy izy. Manaporofo an’izany ny Marka 15:43 hoe: “Nisikina herim-po izy ka nankao amin’i Pilato, dia nangataka ny fatin’i Jesosy.”
Toa nahita ny nahafatesan’i Jesosy i Josefa. Izy aza no nahalala talohan’i Pilato hoe maty izy. Rehefa nangataka ny fatiny i Josefa, dia ‘gaga i Pilato hoe efa maty sahady izy.’ (Mar. 15:44) Raha toa ka nahita an’i Jesosy nijalijaly teo amin’ny tsato-kazo i Josefa, dia mety ho nanenjika azy ny eritreriny ka lasa sahy nampiseho izy hoe mpianany. Na izany na tsy izany anefa, dia nasehony tamin’ny zavatra nataony fa mpianatr’i Jesosy izy.
NANDEVINA AN’I JESOSY
Araka ny lalàna jiosy, dia tsy maintsy nalevina talohan’ny filentehan’ny masoandro ny fatin’ny olona voaheloka ho faty. (Deot. 21:22, 23) Tsy hoatr’izany kosa no nataon’ny Romanina. Navelany ho lo teo amin’ny tsato-kazo ny fatin’ny mpanao heloka bevava, na natsipiny fotsiny tao amin’ny fasana iombonana. Tsy tian’i Josefa hatao an’izany anefa i Jesosy. Nanana fasana vaovao izy. Vatolampy nolavahana ilay izy, ary tsy lavitra an’ilay toerana namonoana an’i Jesosy. Vao niala tao Arimatia * i Josefa ary nifindra tany Jerosalema, matoa mbola tsy nandevenana mihitsy ilay fasana. (Lioka 23:53; Jaona 19:41) Mety ho noeritreretiny hatao fasan’ny fianakaviany ilay izy. Tena tsara fanahy àry izy satria nafoiny handevenana an’i Jesosy ilay fasana. Tanteraka ilay faminaniana hoe halevina miaraka amin’ny “mpanankarena” ny Mesia.—Isaia 53:5, 8, 9.
Misy zavatra hafa lehibe kokoa aminao ve noho ny hoe mifandray tsara amin’i Jehovah?
Samy mitantara ireo Filazantsara efatra hoe rehefa nesorina teo amin’ny hazo fijaliana ny fatin’i Jesosy, dia nofonosin’i Josefa lamba rongony tena tsara ary nataony tao amin’ny fasany. (Mat. 27:59-61; Mar. 15:46, 47; Lioka 23:53, 55; Jaona 19:38-40) I Nikodemosy ihany no voalaza hoe nanampy azy, ka nitondra zava-manitra. Olona ambony izy roa lahy, ka azo inoana hoe tsy ry zareo no nibata an’ilay faty. Ny mpanompony angamba no tena nibata sy nandevina an’ilay izy. Na izany aza no nitranga, dia tena nahavita be izy roa lahy. Naloto nandritra ny fito andro mantsy izay nikasika faty, ary lasa naloto daholo koa izay nokasihiny. (Nom. 19:11; Hag. 2:13) Raha naloto ny olona iray, dia tsy nahazo nifandray tamin’ny olona nandritra ny herinandron’ny Paska, sady tsy afaka nandray anjara tamin’ny zavatra rehetra nifandray tamin’ilay izy. (Nom. 9:6) Mety ho naneso an’i Josefa koa ny mpiara-miasa taminy tao amin’ny Fitsarana Avo, noho izy nikarakara ny fandevenana an’i Jesosy. Efa vonona anefa izy, na inona na inona hitranga rehefa voalevina i Jesosy na rehefa fantatr’olona hoe mpianany izy.
NY NIAFARAN’NY TANTARANY
Ireo tantara ao amin’ny Filazantsara momba ny nandevenana an’i Jesosy ihany no miresaka an’i Josefa avy any Arimatia. Tsy fantatsika àry hoe nanao ahoana izy tatỳ aoriana. Rehefa dinihina anefa ny zavatra noresahintsika teo, dia azo inoana hoe nampahafantariny ny besinimaro fa Kristianina izy. Tsy nihena ny finoany sy ny herim-pony rehefa nisy olana sy fisedrana, fa vao mainka nitombo.
Tsara àry raha mieritreritra an’izao isika: ‘Misy zavatra hafa lehibe kokoa amiko ve noho ny hoe mifandray tsara amin’i Jehovah? Sao dia ny laza, na ny fananana, na ny asa, na ny fianakaviana no zava-dehibe kokoa amiko? Tsy mampaninona ahy ve ny higadra noho izaho tia an’i Jehovah?’
^ feh. 18 Ny tanànan’i Rama angamba ilay hoe Arimatia, ary Rentis (Rantis) no iantsoana azy ankehitriny. Any amin’ny 35 kilaometatra eo ho eo any avaratrandrefan’i Jerosalema no misy azy, ary avy any i Samoela mpaminany.—1 Sam. 1:19, 20.